GoJet Airlines dia manatevin-daharana ny programa fampandrosoana ny pilotan'ny United Airlines 'Aviate
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » GoJet Airlines dia manatevin-daharana ny programa fampandrosoana ny pilotan'ny United Airlines 'Aviate
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Aviate dia manome ireo izay maniry ny hanana asa amin'ny maha-kapitenin'ny United miaraka amin'ny làlana mivantana indrindra hahatratrarana izany tanjona izany
GoJet dia mikasa ny hanitatra ny fanamoriana mpanamory fiaramanidina amin'ny 2021 hanohanana ny fitomboan'ny fiaramanidina
Ny programa aviate dia hamela ny mpanamory GoJet lalana mivantana mankany amin'ny sidina mankany United
Manome fotoana tsara ho an'ny mpanamory fiaramanidina sy ny tompon'andraikitra voalohany ny programa mba handrosoana amin'ny lalan'ny asany
Seranam-piaramanidina GoJet nanambara androany fa hiditra ao amin'ny Aviate izy, United Airlines'programa fampandrosoana pilotam-panavaozana. Aviate dia manome ireo izay maniry ny hanana asa amin'ny maha-kapitenin'ny United miaraka amin'ny làlana mivantana indrindra hahatratrarana izany tanjona izany. GoJet dia mirehareha amin'ny maha-ampahany amin'ity programa manavao sy manovaova ho an'ireo matihanina manidina sy manidina ity ankehitriny. GoJet dia mikasa ny hanitatra ny fanamoriana mpanamory fiaramanidina amin'ny 2021 hanohanana ny fitomboan'ny fiaramanidiny ary faly ny mpitatitra manana an'io làlana io ho an'ireo mpanamory fiaramanidina ankehitriny sy ho avy handroso amin'ny asany.
Ny programa Aviate dia hamela ny mpanamory GoJet lalana mivantana mankany amin'ny sidina ho any United rehefa avy nanao fampiharana tamim-pahombiazana tamin'ny programa, mitazona fari-pitsipika avo lenta, mahafeno ny fepetra takian'ny zotram-piaramanidina ary manidina 2000 ora sy 24 volana miaraka amin'i GoJet, mpitatitra United Express. Aviate koa dia manome fanohanana sy fampianarana ho an'ny mpanamory fiaramanidina hivoatra ho mpitarika izay maneho ny maha-matihanina, ny haavon'ny hatsarana ary ny fanoloran-tena amin'ny fanomezana serivisy azo antoka, be fiahiana, azo ianteherana ary mahomby izay andrasan'ny United amin'ireo mpanamory azy.